Manampahefana ao Hong Kong, sahirana manenjika ny fiparitahan’ireo habaka virtoaly mivoy filambaniny ara-pananahana · Global Voices teny Malagasy
Manampahefana ao Hong Kong, sahirana manenjika ny fiparitahan'ireo habaka virtoaly mivoy filambaniny ara-pananahana
Voadika ny 03 Novambra 2019 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Français, Español, 繁體中文, English
Sary an'ny Hong Kong Free Press. Nahazoana alàlana ny fampiasàna azy
Nosoratan'i Jennifer Creery ity lahatsoratra ity tany am-piandohana ary navoakan'ny Free Hong Kong Free Press (HKFP) tamin'ny 8 Septambra 2018. Naverin'ny Global Voices navoaka etsy ambany ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Fitanisàna hafatra avy aminà mpampiasa miisa 10.000 tao amin'ny fantsona Telegrama izy io, izay toerana izaràna sarim-behivavy mahamenatra nefa tsy nakàna alàlana taminy, izay nitarika ilay mpikatroka Emilia Wong handray andraikitra.
Mpikatroka an-tserasera i Ramatoa Wong izay mitantana “bilaogy momba ny miralenta”, ka ao izy no manoratra lahatsoratra momba ny fizakantena. Volana enina taorian'ny fanarahamaso mangingina ny vondrona Telegram dia navoakany tao amin'ny tranonkalany ny andianà pikantsary maromaro tsy azo lavina. Fitroarana iray teny anivon'ireo fampahalalambaovao no tohin'izany, izay niteraka adihevitra goavana momba ny fiarovana araka ny lalàna omena ireo niharan-doza noho ny heloka bevava misy idiran'ny fampiasàna smartphones.
Nandritry ny herintaona no nandeha tamin'ilay fampiharana fandefasana hafatra Ity rindrambaiko fantsona Telegram ity, “The Street Shooting Valley @callginhk” (lohasahan-tsary teny an'arabe) ary nahangona vondron'olona tia mijery vetaveta izay namoaka sary mihanjahanja mihoatra ny 100 isanandro. Manondro ity fomba fanao ity ilay anarana, “upskirting” (manainga zipo), izay maka sary an-kiafina ny any zipon'ny vehivavy ary avy eo dia mizara izany ety anaty aterineto. Misy koa anefa sary miboridana amin'ireny sary alefan-dry zareo ireny, ary sarin'ankizy tsy ampy taona ny sasany. Hoy i Emilia Wong nanazava:
Tena nivilana ny soatoavin'izy ireo… Entin-dry zareo toy ny fitaovana fampiasa fotsiny ho an'ny firaisana ara-nofo ny vehivavy. Heverin-dry zareo fa amin'ny fomba fanaony firaisana ara-nofo sy ny fomba itiavan'ny lehilahy azy fotsiny no miorina ny lanjan'ny vehivavy.
Araka ny Andininy faha-161 amin'ny Fehezandalàna momba ny fandikandalàna, na iza na iza hita fa meloka amin'ny “fidirana amin'ny solosaina ka manana tanjona hanao heloka bevava na tsy mendrika” (anisan'izany ireo smartphones) dia mety higadra dimy taona an-tranomaizina. Na izany aza, taorian'ny antontan-kevitra iray miteraka resabe dia natsahatra ireo fanenjehana mandra-panazavan'ny fitsaràna tompon'ny teny farany an'ilay lalàna hatramin'ny taona ho avy.
Araka ny voalazan'i Amy (solonanarana), izay nanatevin-daharana ilay vondrona taorian'ny niharan'ny herisetra taminy tamin'ny volana Jolay, dia nahafaly ireo mpampiasa ny @callginhk io fanemorana io . Manazava izy:
Tao anaty metro aho ary nisy olona nanandrana nanaraka ahy, toy ny mpitsikilo ..Mazava ho azy fa naka sary ahy izy satria teo amin'ny haavon'ny kibony na ny lohaliny ny telefaonany, somary ambany dia ambany ihany… natahotra aho ary nihevitra fa mety manana olana ara-tsaina izy.
Fotoana fohy taty aoriana dia nilaza taminy ny naman'i Amy fa mety ho hita ao amin'ny vondrona izay lazaina fa vondrona tia vetaveta ao amin'ny Telegram ireny sary ireny , fampiharana finday iray izay nanjary nalaza teny anivon'ny fiarahamonina noho ny fanafenany azo antoka. vitan'i Amy ny nahita ny anaran'ilay fantsona tamin'ny alàlan'ny namany ary niditra ho mpikambana tao izy:
Rehefa niditra tao amin'ilay vondrona aho, dia maro be ny mpikambana tao … Tohina sady natahotra aho satria nino mandrakariva hoe toerana azo antoka i Hong Kong, saingy misalasala aho ankehitriny.
Nolazain'ny Asian Feminist, sehatra iray misolo tena ny haino aman-jery sosialy amin'ny resaka zon'ny vehivavy, tamin'ny HKFP fa ny haratsin'ny fiarovana araka ny lalàna ny vehivavy ao an-tanàna no mahatonga azy ireo ho marefo:
Avy any amin'ny resaka herisetra an-tokatrano, mankany amin'ny resaka “upskirting”, amin'ny ankapobeny dia taraiky i Hong-Kong amin'ny fanasaziana ny herisetra atao amin'ny vehivav. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy lalàna, na izay aza, manameloka manokana ny fampiharana ny “upskirting“, ary araka ny fitantaran'ny haino aman-jery momba io heloka io, mihamaivana ny sazy, toy ny hoe 18 volana an-tranomaizina, sazy mihantona ho an‘ilay mpitsabo izay naka sary ny anaty zipon'ireo vehivavy marary mankao amin'ny hopitaly.
Amin'izao ora izao, iharan'ny fanenjehana araka ny lalàna isan-karazany ireo voasambotra noho ny fakana sary tsy mendrika, tafiditra ao anatin'izany ny “fanelingelenana eny amin'ny toerana natao ho an'ny daholobe” sy ny ‘fivenjivenjena’. Nilaza tamin'ny HKFP anefa ny solontenan'ny Rainlily, vondrona mpanohana ny ady amin’ ny herisetra ara-pananahana, fa tsy afaka hanamelohana ny endrika maha-ara-pananahana ilay hadisoana natao mba ho lasa heloka bevava raha ireo lalàna ireo.
“Mihevi-tena ho maherifo izy ireo“
Mampiseho ny sary tsy mifaditrovana ananan'ireo mpampiasa azy ny pikantsary avy amin'ny efijerin'ny @callginhk: mieboebo, amin'ny zony no sady manevateva. Nizara ny fijeriny i Emilia Wong :
Mihevi-tena ho maherifo izy ireo … Raha toa ka tsy mahasarika ny mason'izy ireo ny vehivavy iray, dia tsy misy dikany izy izany, tsotra fotsiny toy izay. Toy ny sombin-kena no fitondran-dry zareo azy ireny. Tena manambany tanteraka izany.
Heverin'ireo mpampiasa ilay fantsona fa voninahitra ho an'ny vehivavy ny mahita ny sary nopihan-dry zareo, satria hoe milaza ny ankasitrahan'izy ireo azy izany, hoy i Emilia Wong.
Rtoa Wong tenany koa dia mpikatroka mafana fo ho an'ny fizakantenana ara-batana, ary mamoaka sary mibodirana tsy dia manafintohina loatra ao aminà vondrona kely iray ety anaty aterineto :
Hamoaka sary manazava misimisy kokoa aho ary hilaza fa manan-jo hitafy araka izay tiany ny vehivavy no sady hajaina mandrakariva
Saingy ao anaty tontolo iray izay ahitana ny fifandraisana eny rehetra eny dia mandeha haingana ny teny (na sary) , ary vetivety foana dia hita any amin'ilay vondrona Telegram ireo sary ireo, izay anebatebahan”ireo mpikatroka ny endrika ivelany. “Ndao hotaterintsika ireo rehetra zava-boasoratr'ilay mpivarotena kabota” hoy i Thomas Chan, raha i Kit Hey, mpampiasa iray hafa kosa nilaza hoe ” “Mety misy olona an'arivony maro tsy tia an'ilay mpivarotena kabota”. Mpisera Facebook iray no nandroso teoria nilaza fa tsy mpivarotena nadritry ny tontolo andro izy io taloha.
Niteraka fanompàna taty anaty aterineto ny fikatrohany, anisan'izany ny fandrahonana ho faty sy ny imailaka nalefa ho an'ireo mpampianatra sy mpampiasa azy. Tsy nampiozongozona ny fahavononany izany, na kely aza. Nilaza izy fa te-hanangana rafitra an-tserasera hitorohana ireo fanivaivàna ary ireo mpikatroka manao ny tsy mety:
Toy ny tetikady fampifandanjalanjàna izany. Mba hahatonga azy ireo hahatsapa fa tsy dia tsara aro izy any anatin'ireny vondrona ireny
Teknolojia afaka idirana
Ao amin'ny Taobao, tranonkala fivarotana iray malaza an'i Alibaba, amidy amin'ny vidiny zara raha HK $ 160 (€ 17.50) ny fakantsary fitsikilovana maka endrika penina na fanalahidin'ny fiara. Tsy misy fanivanana izay afaka mividy izany, ka mahatonga azy ho fitaovana mora azo ho an'ireo vetaveta saina ahafahany maka sary ny any anaty zipo. Ho an'i Emilia Wong:
Ao amin'ny [@callginhk], resahan-dry zareo ny fomba hakàna sary tsaratsara kokoa. Miresaka momba ireo fakantsary miafina ao anaty solomaso, vera, ny hidin'akanjo, ny kiraro. . Manontany izy ireo raha misy olona efa nividy ireo fitaovana ireo ary raha azo ampiasaina izy ireny … Amin'ny sary sasantsasany, tena zoro hafahafa no hitantsika nakàny ny sary, toy ny hoe misy fakantsary ao amin'ny kiraron'ny olona iray, satria tsy hety mihitsy ny hahazo zoro ambany be raha fakantsary tsotra na ny findainy no tazonina. Araka izany, inoako fa nisy olona nividy ilay izy ary ampiasainy any Hong Kong amin'izao fotoana izao.
Olana iray atrehan'ny manampahefana miady amin'ny fanorisorenana ara-pananahana atao an-tserasera ny fihodinnkodinana malaky be ananan'ireo vondrona toy ny @callginhk. Raha vantany vao tratra sy aseho masoandro ny iray amin'izy ireny, vetivety dia voafafa ary voasolo amin'ny iray hafa mitondra anarana hafa. Araka ny voalazan'i Emilia Wong, “Telegram no sehatra faratampony indrindra amin'izao fotoana izao noho ny fahatsapan'ny mpisetrasetra hoe tsara aro ny tenany.”
Nanazava i Rtoa Wong fa nahilika ny ezaka nataony nitoriana ilay vondrona tany amin'ny polisy
Nifandray tamin'ny polisy aho, kanefa hitako fa milona fiasa ry zareo … taorian ‘ny hoe efa nasehon'ny fampahalalam-baovao ny zavanisy vao nanomboka nanao fanarahamaso marina izy ireo. Talohan'izany, tsy namaly ahy mihitsy ry zareo. Tsy mino aho hoe afaka miaina tanteraka anatin'ny vanim-potoanan'ny aterineto sy ny fiovana malakin'ny tambajotra sosialy ny polisy
Tao anatina fanambaràna iray ho an'ny HKFP, nilaza ny polisy fa manao fanadihadiana mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoana izao:
Tsy toerana virtoaly ambonin'ny lalàna ny tontolon'ny habaka aterineto, hoy ny fampahatsiahivan'ny polisy. Araka ny lalàna ao Hong Kong, dia afaka koa ampiharina amin'ny tontolon'ny habaka aterineto ny ankamaroan'ireo fepetra napetraka ho an'ny tontolo tena izy .
Tsy novalian'ny Telegram ireo fangatahana marobe nataon'ny HKFP. Tsy miasa toy ny teo aloha intsony ny @callginhk, efa noraràn'ny mpitantana ilay vondrona ny votoaty miboridana sy ny sary ambany zipo, saingy mbola afaka mahazo rohy ampolony maro mitondra mankany amin'ireo vondrona vetaveta sy mpivarotena ireo mpampiasa. Miaraka amin'ireo andiana vondrona hafa marobe izay afaka tetezina, toa tsy bmola hita eny am-paratazana izay ho fehin'ity toedraharaha ity.